အနုပညာကြေးနဲ့ မေမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့တဲ့အပြင် လိုအပ်နေသူတွေအတွက်ပါလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ချယ်ရီသင်း – ျမန္မာသတင္းစံု
အနုပညာကြေးနဲ့ မေမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့တဲ့အပြင် လိုအပ်နေသူတွေအတွက်ပါလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ချယ်ရီသင်း
ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်ချယ်ရီသင်းကိုတော့ပရိသတ်ကြီးသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့မကြာသေးခင်ကမှ*မ လို့ပဲခေါ်* ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကိုထွက်ရှိထားပြီးအဆိုပါသီချင်းလေးကလည်းလူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ နေရာယူထားနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်းချယ်ရီသင်းဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး
လက်ရှိမှာလည်း Producer ဦးကိုကိုနွယ်ကထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး အင်ပါယာMusic Band ကတီးထားတဲ့ U ဂျေ ရဲ့အောင်မြင်တဲ့တေးသီချင်းတွေနဲ့အတူ မိန်းခလေး (၁၀)ယောက်သီဆိုထားတဲ့အခွေလေးမကြာခင်ထွက်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာပထမဆုံးရတဲ့အနုပညာကြေးနဲ့ မေမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့တဲ့အပြင် လိုအပ်နေသူတွေအတွက်ပါလှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါအကြောင်းလေးကိုတော့ချယ်ရီသင်းက” Producer ဦးကိုကိုနွယ်ကထုတ်လုပ်ပေးထားပြီးအင်ပါယာ Music Band ကတီးထားတဲ့ U ဂျေ ရဲ့အောင်မြင်တဲ့တေးသီချင်းတွေနဲ့အတူ မိန်းခလေး (၁၀)ယောက်သီဆိုထားတဲ့အခွေလေးမကြာခင်ထွက်လာပါမည်
သမီးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပါဝင်သီဆိုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါသော Producer ဦးကိုကိုနွယ်နဲ့ U ဂျေကိုကျေးဇူးအထူးပါကဲဘယ်မမတွေပါမယ်ထင်ပါလဲ???ချယ်လေးကဘယ်သီချင်းဆိုမယ်ထင်လဲ???ကိုဗစ်ကာလမှာပထမဆုံးရတဲ့အနုပညာကြေးကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတစ်ချိူ့အတွက်ဆေးဖိုးငွေအချို့လှူဒါန်းပေးပြီးမေမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့ပါတယ်ချယ်လေးနောက်ပိုင်းကျရင်ရတဲ့အနုပညာကြေးထဲကနေတတ်နိူင်သလောက်လှူဒါန်းသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်”ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးသာဓုခေါ်လို့ရအောင်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါနော်…
ကိုဗစ္ကာလမွာပထမဆုံးရတဲ့အႏုပညာေၾကးနဲ႔ ေမေမ့ကိုကန္ေတာ့ခဲ့တဲ့အျပင္လိုအပ္ေနသူေတြအတြက္ပါလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ ခ်ယ္ရီသင္း
ပရိသတ္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ အဆိုေတာ္ခ်ယ္ရီသင္းကိုေတာ့ပရိသတ္ႀကီးသိၿပီးသားျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။သူမကေတာ့မၾကာေသးခင္ကမွ*မ လို႔ပဲေခၚ* ဆိုတဲ့သီခ်င္းေလးကို ထြက္ရွိထားၿပီး အဆိုပါသီခ်င္းေလးကလည္းလူငယ္ေတြရဲ႕ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေနရာယူထားႏိုင္တဲ့အထိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာလည္းခ်ယ္ရီသင္းဟာ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး
လက္ရွိမွာလည္း Producer ဦးကိုကိုႏြယ္ကထုတ္လုပ္ေပးထားၿပီး အင္ပါယာ Music Band ကတီးထားတဲ့ U ေဂ်ရဲ႕ေအာင္ျမင္တဲ့ေတးသီခ်င္းေတြနဲ႔အတူ မိန္းခေလး (၁၀)ေယာက္သီဆိုထားတဲ့အေခြေလးမၾကာခင္ထြက္လာႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ယခုလိုကိုဗစ္ကာလမွာပထမဆုံးရတဲ့အႏုပညာေၾကးနဲ႔ ေမေမ့ကိုကန္ေတာ့ခဲ့တဲ့အျပင္ လိုအပ္ေနသူေတြအတြက္ပါလႉဒါန္းေပးခဲ့ျပီး အဆိုပါအေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ခ်ယ္ရီသင္းက” Producer ဦးကိုကိုႏြယ္ကထုတ္လုပ္ေပးထားၿပီးအင္ပါယာ Music Band ကတီးထားတဲ့ U ေဂ် ရဲ႕ေအာင္ျမင္တဲ့ေတးသီခ်င္းေတြနဲ႔အတူ မိန္းခေလး (၁၀)ေယာက္သီဆိုထားတဲ့အေခြေလးမၾကာခင္ထြက္လာပါမည္
သမီးကိုယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ပါဝင္သီဆိုဖို႔ဖိတ္ေခၚေပးပါေသာ Producer ဦးကိုကိုႏြယ္နဲ႔ U ေဂ်ကိုေက်းဇူးအထူးပါကဲဘယ္မမေတြပါမယ္ထင္ပါလဲ???ခ်ယ္ေလးကဘယ္သီခ်င္းဆိုမယ္ထင္လဲ???ကိုဗစ္ကာလမွာပထမဆုံးရတဲ့အႏုပညာေၾကးကိုလိုအပ္ေနတဲ့လူတစ္ခ်ိဴ႕အတြက္ေဆးဖိုးေငြအခ်ိဳ႕လႉဒါန္းေပးၿပီးေမေမ့ကိုကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္ခ်ယ္ေလးေနာက္ပိုင္းက်ရင္ရတဲ့အႏုပညာေၾကးထဲကေနတတ္ႏိူင္သေလာက္လႉဒါန္းသြားဖို႔ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္”ဆိုျပီးသူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပ၇ိသတ္ၾကီးသာဓုေခၚလို႕ရေအာင္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါေနာ္။
Previous Previous post: မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေချာလို့ အသက်ရှင်တုန်းလေးမှာ ဝါသနာပါတာတွေကိုလေ့လာသင်ယူရင်း ခရီးတွေထွက်မယ်ဆိုတဲ့ တိုင်ရွန်
Next Next post: ကျက်သရေအဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံပြီး ငယ်ငယ်တုန်းကအတိုင်း အရွယ်တင်ပြီးနုပျိုလှပနေတဲ့ မင်းသမီးကြီးခင်သန်းနု